Syria - Communal News - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
အနည်းဆုံးစစ်သား ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည် အင်္ဂါနေ့ညကအစ္စရေးကဆီးရီးယားစစ်တပ်နှင့်အီရန် Quds တပ်ဖွဲ့များပိုင်ဆိုင်သောရာထူးများကိုဆန့်ကျင်သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ထပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (SOHR) ကသေဆုံးသူ ဦး ရေမှာ ၁၀ ဦး ခန့်ရှိပြီး၊ ဆီးရီးယားသုံး ဦး နှင့်အခြားနိုင်ငံခြားမှစစ်သားများအပါအ ၀ င်အီရန်ဟုယူဆရသည်။
နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဘာရိန်းနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Aldulallatif Al-Zayani သည်နေတန်ယာဟုနှင့် Mike Pompeo တို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအစ္စရေးလ်သို့ပထမဆုံးသောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Gabi Ashkenazi အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးကဘာရိန်းမှကိုယ်စားလှယ်များအား Ben Gurion လေဆိပ်၌ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည် စက်တင်ဘာလတွင်တရားဝင်ဆက်ဆံမှုများထူထောင်ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်.
Coronavirus ကပ်ရောဂါအပြီးတူရကီ၏နေတိုးမဟာမိတ်များနှင့်တူရကီတို့၏အငြင်းပွားမှုကြောင့်တူရကီ၏ငွေကြေးသည်ဒေါ်လာနှင့်စံချိန်တင်ပမာဏကျဆင်းခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan သည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ခါးသီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝငျ။
စက်တင်ဘာလ 17, 2020 စက်တင်ဘာလ 17, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားသည်ဆီးရီးယားရှိအကြမ်းဖက်သမားများအပေါ်အင်အားအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရုရှားစစ်တပ်သည်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကစစ်ဘက်ကန်ထရိုက်တာများကစစ်သွေးကြွများကိုလေ့ကျင့်ပေးနေသောအဆောက်အအုံများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Iskander-M အဆောက်အအုံကို၎င်းတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။
အစ္စရေးစစ်ပွဲ - စမ်းသပ်မှုများ၊
စက်တင်ဘာလ 4, 2020 စက်တင်ဘာလ 4, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကသူ၏အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုဇန်န ၀ ါရီလအစပြုခဲ့ချိန်၌ဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည် ဒီကိစ္စဟာရှေ့နေချုပ် Avichai Mandelblit ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဤသည်မှာနေတန်ယာဟုသည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးချိန်းဆိုမှုများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
“ အီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောပြည်သူ့စစ်များ” သည်ဆီးရီးယားကိုအစ္စရေး၏တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 1, 2020 စက်တင်ဘာလ 1, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆီးရီးယားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ "အီရန်အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သောပြည်သူ့စစ် ၇ ခု" အပါအ ၀ င်လူ ၁၁ ဦး ဒမတ်စကတ်တောင်ဘက်အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာသေဆုံးခဲ့သည်။ ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရသေဆုံးသူတွင်အရပ်သားတစ် ဦး၊ ဆီးရီးယားစစ်တပ်သုံးစစ်သည်နှင့်အီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောစစ်သွေးကြွခုနစ်ယောက်ပါဝင်သည်။
ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ကဗီတိုအာဏာ သုံး၍ ပယ်ချခဲ့သည် ISIS အဖွဲ့တိုက်လေယာဉ်များအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏ကံကြမ္မာအတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ The ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အစ္စလာမ်မစ်စစ်သွေးကြွများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုတရားစွဲရန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အမေရိကန်သည် Hariri လုပ်ကြံခံရမှုအပေါ်ကြိုဆိုခြင်းကိုကြိုဆိုသည်
သြဂုတ်လ 19, 2020 သြဂုတ်လ 19, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် Hezbollah အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏ယုံကြည်ချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့သည် Rafic Hariri ကိုသတ်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo က Salim Ayyash ကိုချန်လှပ်မှုဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်ကျေနပ်အားရကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး Hezbollah သည်အီရန်နိုင်ငံ၏လူမျိုးရေးရည်မှန်းချက်များကိုဆောင်ရွက်သောအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစ္စရေးက Roundup: သဘောတူညီချက်များစတင်, ဆန္ဒပြမှုများဆက်လက်
ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 31, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အီရန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားအဆိုပြုထားသောသဘောတူညီချက် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ၊ သုတေသနနှင့်လက်နက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအ ၀ င်နှစ်နိုင်ငံအကြားပိုမိုနီးကပ်သောစစ်ရေးဆက်ဆံမှုကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အီရန်နိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်တရုတ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 25, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
တနင်္လာနေ့တွင်အစ္စရေးသည်ဒမတ်စကတ်အနီးရှိဆီးရီးယားရှိအီရန်နေရာများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဟီဇဘိုလာအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အပါအ ၀ င်ဆီးရီးယားနှင့်အီရန်စစ်သူရဲများစွာသေဆုံးခဲ့သည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ လက်ဘနွန်ရှိ Hezbollah သို့သယ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဆီးရီးယားရှိလက်နက်သိုလှောင်ရုံများကိုဖျက်ဆီးရန်ဆီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးသည်အစ္စရေးဒုံးကျည်အမြောက်အများကိုအောင်မြင်စွာပစ်ချနိုင်သော်လည်းဒုံးကျည်သည်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆီးရီးယားသတင်းစာများအရဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့သည်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသတ်ခံခဲ့ရသည့်အဖွဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ Nasrollah ကအစ္စရေးအားဆီးရီးယားရှိသူတို့၏စစ်သားများအားအန္တရာယ်ပြုပါကလက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသတိပေးထားပြီးဖြစ်သည် အစ္စရေးက Nasrollah အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရာတွင်သူ၏တိုက်လေယာဉ်သည်မတော်တဆသေဆုံးခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 13, 2020 ဇူလိုင်လ 13, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဂျာမနီပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီး Horst Seehofer ကဥရောပနိုင်ငံများထံအီးယူ၏ပြင်ပနယ်နိမိတ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူအသစ်တွေကိုဥရောပသမဂ္ဂထဲ ၀ င်မယ့်လှိုင်းသစ်ကိုမကြာခင်တွေ့မြင်ရတော့မယ်၊ ဒါက ၂၀၁၅ အကျပ်အတည်းထက်ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်”
ဆီးရီးယား - ရုရှားနှင့်တရုတ် Veto UN Aid Package
ဇူလိုင်လ 11, 2020 ဇူလိုင်လ 11, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများသည်သန်းပေါင်းများစွာသောဆီးရီးယားပြည်သူများအတွက်အခြေခံရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအထောက်အပံ့များပေးခဲ့သည်။ ယခုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အလွန်အမင်းအခြေအနေဆိုးရွားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ရုရှားနှင့်တရုတ်တို့သည်ဗီတိုအာဏာကိုထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၌တည်၏။
ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဇူလိုင်လ 8, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုရုရှားနှင့်တရုတ်တို့ကဗီတိုအာဏာသုံး (UNSC) ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများကိုထိခိုက်စေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုဂျာမနီနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးကောင်စီ၏အခြားအဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦး ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 7, 2020 ဇူလိုင်လ 7, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ကုလသမဂ္ဂဆီးရီးယားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေဖြင့်အာဆတ်အစိုးရနှင့်ရုရှားမဟာမိတ်များဖြစ်ကြောင်းပြောကြား Idlib ရှိအရေးပါသောအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦ များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်ကော်မရှင်သည်ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းအရပ်သားများအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်သည်။
ကုလ - ကမ္ဘာသည်အကြမ်းဖက်မှုအား Coronavirus အားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သင့်သည်
ဇူလိုင်လ 7, 2020 ဇူလိုင်လ 7, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့သည် Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးသို့အန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဂူတာရက်စ်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအစွန်းရောက်အုပ်စုများ၏နိုင်ငံရေးခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် အယ်လ်ကေးဒါး နှင့် DaeshCOVID-19 ဖြစ်ပွားခြင်း၏။
A ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာယနေ့ထုတ်ပြန် စစ်ရာဇဝတ်မှုများစွာနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများသည်ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းအီဒလစ်ပြည်နယ်တွင်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါပြစ်မှုများစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ခဲ့ကြသည် 2019 နှောင်းပိုင်းမှ ၂၀၂၀ အစောပိုင်းကာလများအတွင်း Bashar al-Assad အစိုးရ၏ထိုးစစ်များ။
ပြင်သစ်သည်အနှစ် ၃၀ တိုင်အစ္စလာမ်မစ် Tyler Vilus ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ဇူလိုင်လ 4, 2020 ဇူလိုင်လ 4, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ပြင်သစ်တရားရုံးက Tyler Vilus ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ် \_ t အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ပြောင်းလဲပြီးဆီးရီးယားတွင် ISIS အဖွဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူပြင်သစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်အနှစ် ၃၀ အထိ \_ t အစိုးရရှေ့နေသည်တရားခံတစ် ဦး အားတစ်သက်တစ်ကျွန်းစီရင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆီးရီးယားတွင်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွအားပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးအောင်မြင်စွာတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်သည်။
တူရကီနိုင်ငံသည် Idlib ရှိစစ်ဆင်ရေးများပြန်လည်စတင်ရန်ရုရှားကစောင့်ဆိုင်းနေသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 29, 2020 ဇြန္လ 29, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တူရကီကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Hulusi Akar ကတူရကီအနေဖြင့်ဆီးရီးယား Idlib ပြည်နယ်တွင်စစ်ဆင်ရေးများကိုတက်ကြွစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တူရကီစစ်တပ်သည်၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေလုံခြုံရေးအတွက်ခြိမ်းခြောက်နေသော“ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ” ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ဝေမှုကသူ့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇြန္လ 28, 2020 ဇြန္လ 28, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အရှေ့ပိုင်းဆီးရီးယားနိုင်ငံသည်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ AFP ကစနေနေ့တွင်လက်ဘနွန်နှင့်ဆက်နွယ်သောတပ်ဖွဲ့များ၏အနေအထားတစ်ခုအားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် Bashar al-Assad အစိုးရ ဆီးရီးယားအရှေ့ပိုင်း။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုသည်ဆီးရီးယားစစ်တပ်မှအဖွဲ့ဝင်ခြောက် ဦး နှင့်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောတပ်ဖွဲ့များအားသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ဆီးရီးယား - ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းအောက်သန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကိုပိုမိုတင်းကျပ်သည်
သောကြာနေ့ကကုလသမဂ္ဂကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသတိပေး လူ ဦး ရေ ၉.၃ သန်းကျော်သည်လုံလောက်သောအစာမရှိသောကြောင့်ဆီးရီးယားသည်မကြုံစဖူးသောစားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသော်လည်း Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုသည်နိုင်ငံအတွင်းအရှိန်မြှင့်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဇြန္လ 25, 2020 ဇြန္လ 25, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနကအီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံကိုဖော်ပြခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏အကြီးမားဆုံးပြည်နယ်စပွန်ဆာ။ အစီရင်ခံစာအရ "အကြမ်းဖက်မှုကိုအီရန်၏ထောက်ခံမှုလမ်းကြောင်းသည်ဂါဇာမှပါကစ္စတန်အထိခြေရာခံနိုင်သည်"
ဇြန္လ 24, 2020 ဇြန္လ 24, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂသည်လွတ်လပ်ရေးကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းနယ်နိမိတ်သည်ဘယ်တော့မျှလုံခြုံမှုမရှိခဲ့ပါ။ လက်ဘနွန်၊ အီဂျစ်၊ ဂျော်ဒန်နှင့်ဆီးရီးယားတို့ပါ ၀ င်သောအာရပ်နိုင်ငံများသည်ဗြိတိသျှနှင့်ပြင်သစ်တို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ကြသည်။
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်ဆီးရီးယားဆရာဝန်အားဂျာမနီဖမ်းဆီး
ဇြန္လ 22, 2020 ဇြန္လ 22, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဂျာမနီ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီးဒုက္ခသည်အဖြစ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသောဆီးရီးယားဆရာဝန်တစ် ဦး ။ သောကြာနေ့ကအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ Alaa M. ဟုလူသိများသောသံသယရှိသူအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများအားထောင်ထဲရှိအကျဉ်းထောင်များအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သည့်“ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ” တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ အာဆတ်အစိုးရ.
အစ္စရေးစစ်ပွဲ - ပုံမှန်သို့ပြန်သွားသည်၊
ဇြန္လ 5, 2020 ဇြန္လ 5, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
Israelသရေလအမျိုးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ပြီ ကလေးများသည်မျက်နှာဖုံးများကို ၀ တ်ဆင်ပြီးလူမှုရေးအကွာအဝေးကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ တရားဇရပ်များသည်များသောအားဖြင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်၊ အသင်းတော် ၅၀ အထိထပ်မံခွင့်ပြုခြင်း၊ သူတို့သည်မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်ပြီးလူမှုရေးဝေးကွာခြင်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။